Senior Allah: လူမျိုးမပျောက်ရေး စိတ်မအေးနဲ့
mmgamedev March 15, 2009 at 7:06 PM
A-bomb April 13, 2009 at 7:12 PM
ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီလိုဘုန်းကြီးပျက်တွေရှိပါတယ် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းကရှိပါတယ်။ အဲဒါမို့လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကတင်းကြပ်တဲ့ဝိနည်းတွေချမှတ်ခဲ့
တာပေါ့။ မွတ်ဆလင်အီမမ်တွေ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတစ်ချို့ လူမျိုးမုန်းတီးရေးဟောကြားတယ် လူသတ်ခိုင်းတယ် အကြမ်းဖက်ခိုင်းတယ်
VIRATHU July 18, 2009 at 2:05 AM
ဘလော့တာဝန်ရှိသူနဲ့ တွေ့လိုပါသည်။ koaung1981@gmail.com
May January 22, 2010 at 11:27 PM
ဒီ မှာ ..မေ ဆို တဲ့ မွတ် ဆ လင် အ ၇ိူ င်း အ စိုင်း မ.. ဗုဒ္ဒ ဘာ သာ နဲ့ ဘုန်း ကြီး တွေ မ ကောင်း ဘူး ထင် ၇င် ငါ တို့ နိူင် ငံ မှာ မ နေ နဲု ..နင် တို့ မွတ် ဆ လင် တွေ ကို ငါ တို့ မှ မ ဟုတ် ဘူး တ ကမ္ဘာ လုံး က မုန်: တာ ဟဲ့
san February 4, 2010 at 4:03 PM
မြတ် February 26, 2010 at 3:53 PM
အယုတ်တမာ မွတ်ဆလင်ကလားစုတ် hapmalaysia..
ငါတို့မြတ်စွာဘု၇ားဘယ်ကလာတယ်.ဘယ်ခုနစ်မှာမွေးလဲဆိုတာ မှတ်တမ်းနဲ့အတိအကျ၇ှိတယ်. နင်တို့ဘု၇ားလိုဘယ်ကလာမှန်းမသိ.. ဘာ၇ုပ်၇ှိမှန်း မ သိ..အများကောင်းကျိူးအတွက် ဘာ မှကျင့် ကြံအားထုတ် မှူ မ၇ှိ တဲ့ ..ဘာ မှန်းမသိတဲ့ဟာကြီး
ဟုတ်တယ်.. အ၇ည်းကြီးတွေ၇ဲ့အယူမှားတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့..စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်မှု ကို၇ှာတဲ့အခါ ဗုဒ္ဒ ဘာ သာ ဆိုတဲ့အမှန်ဆုံးတ၇ားကိုတွေ့ ၇ှိပီးကိုးကွယ်လာကြတာယနေ့ထိတိုင်အောင်ပဲ..ငါတို့ဗုဒ္ဒ က သူ့ကိုမကိုးကွယ်မယုံကြည်၇င် င၇ဲကျပါစေ..မကောင်းကျိူးဖြစ်ပါစေလို့ကျိန်စာမတိုက်ဘူး. "သူများပြောတိုင်း လဲငါ့ကိုမယုံနဲ့..မိ၇ိုးဖလာကိုးကွယ်မှုကြောင့်လဲစွတ်မယုံနဲ့..ငါပြောတိုင်းလဲမယုံနဲ့..ကိုင်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါ.မှန်တယ်ဆိုမှယုံပါလို့"၇ဲ၇ဲ ၀ံ့ဝံ့ ပြောခဲ့တယ်.ကိုင်တိုင်လေ့လာပြီးမှယုံခိုင်းတဲ့ဘာသာကို..လူလိမ်ဘာသာလို့စွပ်စွဲတာတော်တော်ကြီးကို၇ီစ၇ာကောင်းလှပါတယ်.
ဗုဒ္ဒူဟာအမှန်တ၇ားကိုတွေ့၇ှိဖို့အတွက် လူတကာတို့မက်မောတဲ့နန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးသတ္တ၀ါတွေကိုကယ်တင် ဖို့အမှန်တ၇ားကို၇ှာဖွေခဲ့တယ်...သတ္တ၀ါတွေဆိုတာလူတမျိူးတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်. တိ၇စ္ဆန်. ပြိတ္တာ အစ၇ှိ တဲ့အပယ်လေးဘုံမှာကျင်လည်နေကြတဲ့အ၇ာအားလုံးကိုဆိုလိုတယ်.. နင် တို့ဘု၇ား အဲ့လိုမေတ္တာထားနိုင်လား?
သူ့ကိုကိူးကွယ်တဲ့သူတွေကိုချစ်လို့စားခွင့်ပြုတာပါဆိုပီးအပြစ်မဲ့တဲ့ နွား. ဆိတ်.သိုး.ကုလားအုတ်ကလေးတွေကိုလည်လှီးပီးသတ်စားခိုင်းတယ် ..ကိုချင်းမစာမနာလုပ်၇က်တယ်..အဲ့ဒီအကောင်လေးတွေ. နင်တို့သတ်တာမခံ၇ခင်. မျက်၇ည်ကျပြီးပြင်းပျစွာခံစား၇တဲ့ဝေဒနာကိုနင်တို့မို့ကြည့်၇က်တယ်. .နင်တို့ဘာသာလောက်၇က်စက်မှူကမ်းကုန်တာနင်တို့ဘဲ..
hapmalaysia..နင့်လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့.. ‘သဘာဝကပေးတာကိုမသုံးစွဲပဲ ဆန့်ကျင်ဘက်နေခိုင်းတာကို..သဘာဝမကျဘူးယုတ္တိမ၇ှိဘူးလို့ နင်ထင်နေတယ်..ခံစားပေါ့သဘာဝကပေးတာ တွေ ကို..နင့်တို့လိုလူမျိုးတွေ.. သံသ၇ာဝဋ်ဆင်း၇ဲကလွတ် မှာ မ ဟုတ်ဘူး..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော ၇ ၇င်.. ငါတို့်ကိုယ်တိုင်လဲအဲဒိလောက်အထိတော့မလုပ်နိုင်ဘူး..ဒါပေမဲ့အခြေခံသီလတွေကိုတော့စောင့်ထိန်းနိူင် သေးတယ်..အများအကျိူးအတွက်ကိုကျိူးစွန့်အနစ်နာခံ ပီးကျင့်ကြံနေထိုင်နေတဲ့. သံဃာတော်အ၇ှင်မြတ်တွေဟာဘု၇ား၇ဲ့ကိုယ်စား လူတွေကို တ၇ားဟောလမ်းပြပေးတဲ့သူတွေမို့လို့ ..အတိုင်းထက်မက ကြည်ညိုစ၇ာကောင်းလှပါတယ်..နင်ကမေတ္တာတ၇ားကြီးမားတဲ့ဆ၇ာတော်သံဃာတော် တွေကို မလေ့လာပဲ. အကျင့်ပျက်ဝိနည်းနဲ့အညီမနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ကြည့်ပီးငါတို့ သံဃာတော်တွေကို စော်ကားတဲ့နင့်၇ဲ့စိတ်ဓာတ်ကအောက်တန်းကျလွန်းလှတယ်...အကျင့်ပျက်သံဃာတွေကို. ဘု၇ား၇ှင်ကသက်၇ှိ်ထင်၇ှား၇ှိစဉ်ကအပစ်ပေးတော်မူတဲ့အပြင်..သေတဲ့အခါလည်းင၇ဲခံကြ၇တယ်
ငါတို့ဘု၇ားက..ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် မသူတော်ဆိုတဲ့ လူသာမာန်တို့၇ဲ့အပေါစားစိတ်ဓာတ်မ၇ှိဘူး.. သူဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်နိမ့်ချတော်မူတယ်..ဒါပေမဲ့ဘု၇ားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္မာယ်ကို၇ှင်းပြတော်မူခဲ့တယ်
မြတ်စွာဘု၇ားပွင့်တော် မမူစဉ်က ဘာသာပေါင်းစုံအယူပေါင်းစုံ ဟာအခုခေတ်လိုပဲ၇ှိခဲ့တယ်..နင်တို့ဘာသာလို.မိစ္ဆာတိထ္ထိအယူဝါဒတွေလဲ၇ှိမှာပေါ့..အဲ့ဒီအချိန်ကဗုဒ္ဒ ဘာ သာ ဟာကမ္ဘာတ၀ှန်း မှာထွန်းတောက်ခဲ့တယ်.. မြတ်စွာဘု၇ားမ၇ှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း..နင်တို့လိုအကြမ်းဖက်ဝါဒတွေပေါ်လာပီး..မတ၇ားအကြမ်းဖက်သိမ်းသွင်းခံ၇လို့..သာသနာတော်ညှုိးမှိန် ခဲ့ ၇ တာ..ဗုဒ္ဒ ဘာ သာ ၀င် သံဃာတော်တွေကို၇က်၇က်စက်စက်သတ်ဖြတ်ပီး မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်အောင်အတင်းအဓမ္မသိမ်းသွင်းတာဘယ်သူတွေလဲ..သိတတ်၇င်၇ှတ်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်..အကြမ်းအ၇မ်းနဲ့ယှဉ်၇င်. ဗုဒ္ဒ ဘာ သာ ဟာ အ မြဲ ၇ှုံး ၇ တာ ပဲ. ပီးတော့ ..နင်တို့ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့နိ်ုင်ငံတွေဟာလူဦးေ၇များတယ်..အဲ့ဒီလိုများနိုင်အောင် .နင် တို့ဘာသာကလိင်ကိစ္စကိုအားပေးတယ်..မျိူးများများပွားနိုင်အောင် ..မိန်းမများများယူခိုင်းပီး..ခလေးတွေ ကို တိ၇ာစ္ဆာန်မကမွေးတဲ့အတိုင်းမွေးခိုင်း တယ်.အဲ့ဒိလိုနည်းနဲ့မျိူးပွားလိုးနင်တို့ဘာသာလူများနေတာ..မ၇ှက်တဲ့အပြင်လာပီးဂုဏ်ယူနေတာစိတ်ပျက်စ၇ာတော်တော်ကောင်းတယ်
ငါတိုဘာသာလိုကိလေသာတဏှာ၇ာဂေ၇ှာင်တဲ့ ဘုန်းကြီး၇ဟန်းတွေ၇ှိတဲ့ဘာသာ ဘယ်မှာမှမ၇ှိဘူး..အဲဒီဘုန်းကြီးတွေသာအိမ်ထောင်သားမွေးပြုတဲ့သူတွေဆို၇င်နင်တို့လိုလူများမှာပဲ.. ငါတို့ဘာသာ၇ဲ့၇ည်၇ွယ်ချက်က လူဦးေ၇များဖို့မဟုတ်ဘူး.သံသ၇ာဝဋ်ဆင်း၇ဲကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲ.
ငါတို့ဘု၇ားဟာကုလားလူမျိုးမဟုတ်ဘူး..ဘု၇ားပွင့်တော်မူတဲ့နေ၇ာဟာ ကမ္ဘာကြီး၇ဲ့အလည်ဗဟိုနေ၇ာ မှာဖြစ်တယ်..အိန္ဒိယပြည်၇ဲ့တောတွင်းတနေ၇ာမှာပွင့်တော်မူတာ..အိန္ဒိယပြည် သားကုလားလူမျိုးမဟုတ်ဘူး..နင်တို့လိုအမျိုးယုတ် ဇာတ်နိမ့််တဲ့ ကျက်သေ၇တုန်းအသမဲကုလားမျိုးမဟုတ်ဘူး..မြင့်မြတ်တဲ့တော်ဝင်ဘု၇င့်သားတော်တယောက်ပါ..
thaw June 7, 2010 at 3:52 PM
ရယ်ချင်လိုက်တာ.....မြတ်ရယ်....မြက်စားပြီးများပြောနေသလား.... နင်တို့ရှင်ပြုပွဲတို့ ဘာသာရေးပွဲတို့မှာ သတ်တဲ့အကောင်တွေကျတော့ သနားစရာ မကောင်းဘူးလားဟင်.... ကိုယ့်ဘာကိုယ် ပြန်ဖုံးပါဥိး... ကိုယ်မလုံပဲနဲ့များ သူများကို လိုက်လှန်ချင်သေးတယ်...ဟိ.... ရှင်ဟာလေ အရှက်နည်းလှချည်လာ...
Aung August 19, 2010 at 7:52 AM
i want to suggest all of the people on this blob
you should stop your fighting.
All of you first need to know the goal and ambition of each religious of your own.
For the islamic person,you ,too, need to know what your great god "Allah" want about you.I think all of the religion aim the people to be peaceful .Each person of the different religion need to know that if you want to point out to other religion ,you have to know well about that religion.May I suggest all the people on
this site .If you want to say about Buddhism ,you should know well about well.And ifabuddhism want to say about islamic or other religion,you have to know well about them. You all should not say too extreme. Be peaceful and patient.
အောင်ကျော်ထွန်း November 14, 2010 at 1:28 AM
Than November 19, 2010 at 7:58 PM
အလ္လာဆိုတဲ့ကောင်က သူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကို သတ်ပစ်မယ်၊ငရဲပို့ပစ်မယ်ဆိုပါလား
ဒီအလ္လာဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ စောက်ခွက်ဖြတ်ကန်ပြမယ်၊ စောက်ရူးမူဆလိမ်တွေ
ဟိုဟာမက်ထွင်ထားတဲ့ခွေးကျမ်းကိုယုံပြီး မြေခွေးလိုကြင့် မြေခွေးလိုကြံနေကြတယ်
ပြောရင် ကိုယ့်အမေတောင်ပြန်လိုးကြမယ့်ကောင်တွေ ၊ ဟေ့ကောင်တွေမြဲမြဲမှတ်ထား
ကြ မင်းတို့ကို အလ္လာဆိုတဲ့ကောင်က ဖန်းဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူး ၊မင်းတို့အမေကို
soe naing March 31, 2012 at 1:43 AM
ဟေ့ကောင်Than မင်း ခရစ်ယန်(သို့)ဗုဒွ့ဘာသာရခိုင် ဘဲဖြစ်ဖို့များတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်စောက်အရေးမကြီးဘူး။မင်းတို့ကဖင်ခံမျိုးတွေဘဲ၊မင်းတို့ကို ဘုရားကဖင်ခံဖိုအတွက်ဘဲဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။မင်းကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားနဲကျမ်းကိုငါ့ကလေးစားတယ်။အိစွ့လာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကတခြားဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနဲကျမ်းတွေကိုမင်းရိုင်းသလို စော်ကားခွင့်မရှိဘူး။မင်းနဲ့မင်းရဲ့လူမျိုး၊မင်းရဲ့ဘုရားနဲ့ကျမ်း ဘယ်လောက် အောက်တန်းကျတဲ့ဆိုတာ မင်းရဲ့အရေးအသားကသက်သေပြနေတာဘဲ။
မင်း ကိုးကွယ်ချင်စိတ်တောင်ပျောက်သွားမယ်။ဘင်္ဂလီဗုဒွ့ကုလားရခိုင် တုတွေရိုင်းသလိုမမိုက်ရိုင်းနဲ့။ယဉ်ကျေးလိုက်စမ်းပါဖင်ခံမျိုးရယ်။
kyawsitt December 1, 2010 at 5:10 PM
သန်းဆိုတဲ့ ဆရားကြီးပြောတာ ဟုတ်သလိုပဲ... ဘယ်သူကို ဘယ်လိုမွေးတယ်... ဟီဟိ .. .ရှင်းသွားဘီ
yarzar May 7, 2011 at 11:53 AM
shahwana May 15, 2011 at 5:24 PM
kyaw kyaw January 9, 2012 at 9:49 PM
soe naing March 30, 2012 at 9:58 PM
soe aung April 4, 2012 at 12:40 AM
ခွေးမသားဘလောက်ဂါ မင်းတို့ခရစ်ယာန်တွေနောက်ထပ်ဘာလုပ်ဖိုကျန်သေးလဲ။မင်းတို့အမေနှမတွေကိုတောထဲ၊ တောင်ထဲမှာစစ်သားတွေမဒိန်းကျင်တာနည်း တောင်နည်းသေးတယ်။ဒီတခါတောတနိုင်ငံလုံးသွားလိုးကြမယ်။စောက်အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံကောင်းကျိုးလုပ်သင့်တာမလုပ်ဘဲဖင် ယား၊ဖင်ကုတ်နေတာရှက်စမ်းပါ။
soe yazar April 21, 2012 at 9:06 PM
သဘောထားမှတ်ချက် ချီးမြှင့်ကြသည့်အတွက် ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ-